Achondrogenesis (Achodrongenesis အရိုးများနှင့်အရိုးနုများ ပုံပျက်သည့်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Achondrogenesis (Achodrongenesis အရိုးများနှင့်အရိုးနုများ ပုံပျက်သည့်ရောဂါ)
Achondrogenesis (Achodrongenesis အရိုးများနှင့်အရိုးနုများ ပုံပျက်သည့်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
အရိုးများနှင့်အရိုးနုများ ပုံပျက်သည့်ရောဂါဆိုတာဟာ ရှားပါးပြီး ဆိုးရွားတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓါတိုတောင်းပြီး ခြေလက်များသေးခြင်း၊ ရင်ဘတ်ကျဉ်းခြင်း တွေ့ရပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားစေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ အလုံအလောက် မထွက်ရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရလာဒ်အနေနဲ့ အရိုးနုနဲ့အရိုးတွေ ကောင်းစွာ မဖွံ့ဖြီုးဘဲ အရိုးငြမ်းအဖွဲ့အစည်းမှာ ပုံစံမမှန်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သင်နဲ့သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ ဒီရောဂါဖြစ်စေတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇကို သယ်ဆောင်လာတယ်ဆိုရင် သင့်ကလေးမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။ ဒီရောဂါရှိတဲ့ ကလေးအများစုဟာ အသက်ကောင်းစွာ မရှူနိုင်တာကြောင့် မွေးဖွားခြင်းမပြုမီနဲ့ မွေးကင်းစအရွယ်မှာ သေဆုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဒီရောဂါအတွက် ကုသဖို့ နည်းလမ်း မရှိပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ကျန်တဲ့သက်တမ်းကို အသက်သာဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးဖို့ပဲ တတ်နိုင်ပါတယ်။
Achondrogenesis (Achodrongenesis အရိုးများနှင့်အရိုးနုများ ပုံပျက်သည့်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
စာရင်းဇယားများအရ ဒီရောဂါနဲ့ တခြားပုံစံတူရောဂါဖြစ်တဲ့ အရိုးများနှင့်အရိုးနုများ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးတဲ့ပြသနာ နှစ်မျိုးစလုံးဟာ ကလေးပေါင်း ၄သောင်းကနေ ၆သောင်းမှာ တယောက်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်တဲ့ အချက်တွေကို လျှော့ချပြီး ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
Achondrogenesis (Achodrongenesis အရိုးများနှင့်အရိုးနုများ ပုံပျက်သည့်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ခြေလက်များ တိုတောင်းပြီး ရင်ခေါင်းကျဥၤးတာဟာ ဒီရောဂါ အမျိုးအစားများ အားလုံးမှာတွေ့ရပါတယ်။ တခြား လက္ခဏာတွေကတော့ အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပါတယ်။ တမျိုးချင်းစီကို အတိအကျ သိရအောင် မျိုးရိုးဗီဇ စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အမျိုးအစား 1A လက္ခဏာများ
အမျိုးအစား 1B လက္ခဏာများ
ခြေထောက်များ အတွင်းဘက်သို့ ခွင်ခြင်း
အမျိုးအစား2လက္ခဏာများ
ဒီအမျိုးအစားမှာ ကလေးရဲ့ ဦးခွံရိုးဟာ အလွန်ပျော့ပြီး ခြေလက်တွေ တိုပါတယ်။ ကျန်အမျိုးအစားတွေမှာလိုပဲ ရင်ခေါင်းကျဉ်းပြီး အသက်ကောင်းစွာ မရှူနိုင်ပါဘူး။ ကျောရိုးနဲ့ တင်ဆုံရိုးကွင်း ကောင်းစွာ မဖွံ့ဖြိုးပါဘူး။ ကျိုးပဲ့လွယ်တဲ့ နံရိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အမျိုးအစား 1A နဲ့ တူပါတယ်။ ခွဲခြားဖို့အတွက် မျိုးရိုးဗီဇ စစ်ဆေးမှု လိုအပ်ပါတယ်။ ခြေလက်တိုပြီး ရင်ခေါင်းကျဉ်းတဲ့အပြင် ဝမ်းဗိုက်လုံးပါတယ်။ တခါတလေ ပေါင်ခြံနဲ့ ချက်အနားမှာ အိတ်လိုမျိုး ဖောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ခြေထောက်များဟာ အတွင်းဘက်ကို ခွင်နေတတ်ပါတယ်။ ခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေ အလွန်တိုပါတယ်။
တခြား အမျိုးအစားတွေလိုပဲ ခြေလက်တိုပြီး ရင်ခေါင်းကျဉ်းပါတယ်။ နံရိုးများတိုပြီး
အဆုတ်များဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းပါတယ်။ ကျောရိုးနဲ့ တင်ဆုံရိုးတွေ ကောင်းကောင်း မဖွံ့ဖြိုးပါဘူး။
မေးစေ့သေးပြီး နဖူးနဲ့ဝမ်းဗိုက်ကြီးပါတယ်။ တချို့ကလေးတွေမှာ မမွေးခင်မှာ သူတို့ခန္ဓါကိုယ်ထဲ အရည်တွေ အများကြီး ရှိနေတတ်ပါတယ်။
Achondrogenesis (Achodrongenesis အရိုးများနှင့်အရိုးနုများ ပုံပျက်သည့်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မျီုးရိုးဗီဇပြသနာဖြစ်ပါတယ်။ သင်နဲ့ သင့်အိမ်ထောင်ဘက်ဟာ ဒီမျီုးရိုးဗီဇကို သယ်ဆောင်ရင် သင့်ကလေးမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၂၅%ရှိပါတယ်။ ဒီပြသနာဟာ ငုပ်လျှိုးဗီဇဖြစ်တာကြောင့် သယ်ဆောင်သူမိဘများမှာ လက္ခဏာမပြတတ်ပါဘူး။
Achondrogenesis (Achodrongenesis အရိုးများနှင့်အရိုးနုများ ပုံပျက်သည့်ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အောက်ပါအခြေအနေမှာ ဒီရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။
Achondrogenesis (Achodrongenesis အရိုးများနှင့်အရိုးနုများ ပုံပျက်သည့်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဒီရောဂါရှိတယ်လို့ ဆရာဝန်က သံသယရှိရင် စစ်ဆေးမှုဗတွ သေချာပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ရောဂါကို ပိုမိုတိကျစွာသိဖို့၊ ခွဲစိတ်မှုအတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ စစ်ဆေးမှုဗတွလည်း ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါ စစ်ဆေးခြင်းူတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အရိုးများကို စစ်ဆေးရန် ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း
များသောအားဖြင့် ဒီပြသနာဟာ သာမန်မျက်စိနဲ့တောင် အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါတယ်။
Achondrogenesis (Achodrongenesis အရိုးများနှင့်အရိုးနုများ ပုံပျက်သည့်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသဖို့နည်းလမ်း မရှိပါဘူး။ ကလေးကို တတ်နိုင်သလောက် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် ထားဖို့ပါပဲ။ ဆေးရုံမှာ ကလေးအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ပြီး အသက်ရှူတဲ့ ကိရိယာတွေ တပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ နာကျင်မှုတွေ သက်သာအောင် ဆေးဝါးတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီရောဂါရှိတဲ့ ကလေးအများစုဟာ အသက်ရှူရခက်ခဲတာကြောင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ သေဆုံးကြပါတယ်။ မိခင်ဝမ်းတွင်းမှာလည်း သေကြပါတယ်။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက အရိုးများနှင့်အရိုးနုများ ပုံပျက်သည့်ရောဂါခြင်းအတွက် အထောက်အကူ ပြုသလဲ
သင့်မိသားစုထဲမှာ ကြုံဖူးရင် မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး အကြံပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဥၤအတွင်းမှာ ဆရာဝန်ဟာ သင်ပရဲ့ ရောဂါရာဇဝင် မေးမြန်းခြင်း၊ မိသားစုနှစ်ဖက်စလုံးက ကျန်းမာရေးအကြောင်း မေးမြန်းခြင်း စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ သင် ဒါမှမဟုတ် သင့်အိမ်ထောင်ဘက်က ဒီရောဂါ သယ်ဆောင်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ စုံတွဲတွေမှာ မိသားစု ရာဇဝင်ရှိခဲ့ရင် ကလေးယူမယူ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
Achodrongenesis. http://www.healthline.com/health/achondrogenesis#types2 . Accessed June 10, 2017.
Achodrongenesis. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/achondrogenesis . Accessed June 10, 2017.
Achodrongenesis. http://emedicine.medscape.com/article/941176-overview . Accessed June 10, 2017.
သင့်တံတောင် နာကျင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများကို လေ့လာပါ။